Kupeta Simba Wiricheya
Simba Rinopeta Mawiricheya kubva kuKarman Healthcare inobvumidza iwe kupeta backrest yekumira kwako wiricheya nokusunungura mapfundo maviri kumashure kwerestrest. Izvi zvinokutendera iwe kupeta backrest pasi pasi kuti uchengete zviri nyore, kungave kuri mumotokari, kana nzvimbo yekuchengetera, yedu Kumira Mawiricheya uine chinhu chinokutendera kupeta pasi backrest yecompact uye inyore yekuchengetedza.
XO-202 uye XO-101 inobvumidza iwe kupeta backrest yeiyo wiricheya mumatanho maviri akareruka. Tinotakura Simuka Mawiricheya ayo anoonekwa sekupeta simba Mawiricheya nekuti iwe unogona kupeta backrest yechigaro pasi pachigaro, kuitira kuti uichengete kana kuendesa kune imwe nzvimbo.
Simba rekupeta Mawiricheya ipa akati wandei maficha anotendera zvimwe zvinobatsira kusimba wiricheya mushandisi. Kupa yakakwira nyaradzo, aya masimba Mawiricheya zviri nyore uye zviri nyore kutakura uye kuchengeta. Yakanyanya kupeta simba Mawiricheya zvakagadzirirwa kushandiswa mumba, inotakurika simba rekupeta wiricheya inogona kubatsira zvakanyanya pakufamba kana kuchengeta cheya yako uchienda.
Simba redu wiricheya kupeta backrest inopeta pasi neyakaoma kuyedza, iyo backrest inopetwa nyore kutakura. Kana iwe uchitsvaga simba wiricheya ine folda furemu, ipapo iyo XO nhepfenyuro haisi iyo chaiyo wiricheya zvako.